China Powder Dahaar Saddex gees leh Xiddigta Picket Steel Y Deedka Boostada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Boorka Xididka ee Xiddigga Saddex-geesoodka ah ee Dahaarka leh ee budada ah
Boostada xayndaabka birta ayaa sidoo kale loo yaqaan boostada Y birta, birta xiddigta birta, birta birta, birta birta, birta xayndaabka, iwm. 10 cm.Mid ka mid ah cidhifyada ayaa la tilmaamayaa si birta birta ah ay si fudud dhulka ugu dhufato, cidhifka kalena waa siman yahay si uu u daboolo dubbaha.Godad horay loo sii qoday ayaa lagu qodaa dhererka tiirarka si fiilooyinka loogu dhejiyo seeraha si loo sugo xayndaab ku meel gaar ah, shabaqyada xannibaadda, iwm.
1) Daaweynta dusha sare: budada dahaarka leh ama galvanized kulul la rusheeyey
2)Standard: Halbeegga Ameerikaanka, Halbeegga Australia, Halbeegga Yurub
3) Dhererka: 0.45m-3.0m, ama sida looga baahan yahay macmiilka
4) Midabka: Black, cawl alwaax ah, ciid webiga, w / t daahan, jasper, taallo, domain, warqad, manor cas, iwm.
6) Codsiga: Xayndaabka Beerta, Xayndaabka Jidka, Xayndaabka Ciyaaraha, Xayndaabka Beerta, iwm.
Boodhkayaga budada ah ee dahaarka leh ee saddex geesoodka leh ee birta xayndaabka Y waa mid adag, waara, dayactir hooseeya waxaana la waafajin karaa si ay ugu habboonaato isticmaalka deyrka badan ee garoomada diyaaradaha, jidadka tareenada, garoommada ciyaaraha, goobaha dhismaha, wareegyada iyo barkadaha dabaasha, iwm.
FAQ ku saabsan Boostada Deedka Y
1. Dhexroorka ugu yar ee tuubada boostada waa 76mm?
Dhexroorka ugu yar ee 76mm oo leh dhumucdiisuna tahay 2.9mm iyo dhinaca geeska min dia.160mm, dhumucdiisuna waa 3.6mm.
2. Immisa albaab ayaa loo baahan yahay 2 kiiloomitir oo xayndaab silsilad ah?
3. Shuruudo faahfaahsan oo loogu talagalay bar xiisadda xagga sare?
Dhexroorka 76mm dhumucdiisuna waxay tahay 1.8mm iyo dhererka 2800mm.
4. Immisa tiirarka gees ah ayaa looga baahan yahay 2 kiiloomitir xayndaabka silsiladda?
5. Dhererka boostada ee loo baahan yahay iyo dhererka deyrka?
Dhererka bowdku waa 2650mm, dhererka xayndaabku waa 2,000mm iyo cududda Y-sare waxay leedahay dherer 500mm.